Bankiyada Muqdisho oo Lumiyey Malaayiin Doolar.. Go’aankan ayey dowladdu Qaadatay | Xaqiiqonews
Bankiyada Muqdisho oo Lumiyey Malaayiin Doolar.. Go’aankan ayey dowladdu Qaadatay
Qaar ka mid ah bankiyada Muqdisho ku yaalla ayaa lumiyey lacago lagu sheegay ku dhawaad 100 Milyan oo doolar, ka dib markii dad badan ay maalgashteen suuqa sarifka caalamiga ah ee “Forex”.
Khasaaraha ugu badan ayaa hareeyey Bankiga ku dhisan ganacsiga “Boortafooliyada” ee ay leedahay shirkadda Isgaarsiinta Hormuud, sida ilo xog ogaal ay noo sheegeen, muddo ka yar 6 bilood, waxaa bankiga Salaama lagala baxay lacag dhan 50 Milyan oo doolar.
Lacagaha lala baxay ayaa u badnaa lacago “keyd ah” kuwaasi oo bankiga uu u isticmaali jiray in uu ku kala furdaamiyo howla maalmeedka lacag la bixidda, hase ahaate arintani ayaa sababtay in bankiga uu si ku meel gaar ah u joojiyo lacagihii “uu bixin jiray”.
Xor uma ihi in aan Lacagteyda La baxo!
Qof ka mid macaamiisha Bankiga ayaa yiri “markii hore aniga oo taleefonkeyga heysta ayaan la bixi jiray intii aan doono oo lacag, balse malmahan lacag la bixidda tashwiish ayey ku fureen”, isagoo intaasi ku daray “waxa uu taleefoonka ii soo qorayaa “error” .
Sababta ugu badan ee ay u musalifeen bankiyadan ayaa lagu tilmaamay in ay tahay nidaamka ganacsiga internet-ka ee “forex” kaasi oo dad badani ku dhiiri geliyey in ay ku shaqeeyaan lacagahooda, waxaana yaraaday dadka keydka dhigan jiray bankiyadan.
Xogaa xirfad Xumo ah
“waxa ay maalgeliyeen xaafado ay ka mid tahay “Daaru salaam”,waxa ayna ku ciyaareen lacagtii keyda aheyd” ayuu yiri qof ka tirsan macaamiisha Salaama Bank.
“Lacagteyda, hadii ay taalo 6 sano ka badan, wax faa’ido kama helaayo, marka maxaa ku jaban hadii aan maalgashto oo aan forex ka shaqeysto” ayuu sii daba dhigay macmiilkani, isagoo bankiga ku eedeeyey waxa uu ugu yeeray “Xirfad xumo”.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan soo saartay nidaam ay ku ciqaabeyso ganacsatada danyarta ee ku shaqeysto sarifka “forex”, go’aankani ayey dadkiu ku sheegeen in uu yahay isku day ay Dowladdu ku badbaadineyso “Bankiydan musalifay”.